AKHRISO:-Dadka Reer Kenya Oo Doonaya in Dawladoodu Isaga Baxdo Kiiska Badda ee Kala Dhexeeya Soomaaliya | Saadaal Media
AKHRISO:-Dadka Reer Kenya Oo Doonaya in Dawladoodu Isaga Baxdo Kiiska Badda ee Kala Dhexeeya Soomaaliya
Jul 5, 2019 - jawaab
Qareenka guud ee kenya ayaa doonaya in maxkamadda ay daaqaddaa ka tuurto kiis ay soo gudbiyeen dad reer kenya ah oo doonayo in dowladdooda ay ka baxdo kiiska la xiriira muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaliya.
Kiiska ayaa waxaa gudbiyay labaatan sharci yaqaan oo uu hor kacayo Weldon Korir, kuwaasi oo ku doodaya in ka qeyb galka kenya ee kiiskani uu ka hor imaadsanyhay sharciga dalka.
Qareenka guud ee Kenya, Kennedy Ogeto, ayaa sheegaya kiiska ay geeyeen Kiriro wa Ngugi iyo labaatanka kale uu yahay mid iska ciyaar ah. Dacwad oogeyaasha ayaa waxaa matalyay qareen Kibe Mungai.
FFICE OF THE PRIME MINISTER-ETHIOPIA
Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xsuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.